Home News Waxgaradka K/galbeed oo ka digay in Ciidamada Amniga Maamulkaasi la xaqiro
Waxgaradka K/galbeed oo ka digay in Ciidamada Amniga Maamulkaasi la xaqiro
Iyadoo dhawaan dowlada federaalka ah Ee Soomaaliya ay Ciidamo geeyeen Magaalada Baydhabo ee xarunta KMG ah ee maamulkaasi ayaa waxaa soo baxaya eedeeymo la xariira arinkaasi oo loo jeedinaayo Dowlada dhexe.
Nabadoon Macaoow oo ka mid ah waxgaradka Maamulkaasi oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in dowladu ay qaadeeyso masuuliyada ka dhalata arinkaasi.
Sidoo kale waxaa uu ka digay In la ijaafeeyo Ciidamadii hore u jaagay Magaalada Baydhabo kuwaasi oo howl wanaagsan qabanaayay
Previous articleWararkii ugu dambeeyay:-Caawa maxaa ka cusub Magaalada Baydhabo!!
Next articleNuur Samawad oo ka tirsanaa ciidanka Gaashaan oo shaqada laga ceyriyay? Sabab
Salaadiinta Puntland: “..wiilkaa madaxa yar yaanu naga bur-burin dowladii 20ka sano...
Faahfaahin:-Qarax Goordhaw Muqdisho ka dhacay